Sidina miditra any Nosy-Be Mifamolaka ny Fanjakana sy ny Ethiopian Airlines
Taxi be tsy manaja fepetra Tokony mandray andraikitra ny koperativa
Air Madagascar Tsy avelan’ny Frantsay miditra any aminy
Toby fiantsonana Fasan’ny Karana Tafapetraka ny tonelina fidiovana
Manodidina ny 300 isa eo ihany koa ireo moto sy bisikileta mitady lalana saingy ny 200 amin’izy ireo ihany koa no tsy maintsy averina. Noho ny tsy fisian’ny anton-dian’izy ireny mazava no voalaza fa anton’izany. Ho an’ireo fiara mpitatitra entana ohatra dia misy ireo mitondra olona an-tsokosoko izay hafangarony amin’ny entana. Eo ihany koa ireo mitondra olona mihoatra ny isa nifanarahana amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao ankoatra ny mpamily sy ny mpanampy azy…. Ho an’ireo tratra moa dia fantatra fa efa nosaziana avokoa izy ireny. Tanjona ny hitandrovana hatrany ny fahasalaman’ny mpiray tanindrazana manoloana ny fihanaky ny COVID 19 eto amintsika.